कृष्णराज सर्वहारी आइतवार, असोज २९, २०७४ 859 पटक पढिएको
चारबर्से जमिला साह्रै चकचक गर्छे । फर्‍याक फुरुक गरिरहन्छे ऊ । नानाथरी प्रश्न गरेर बा आमालाई हैरान पार्छे । स्कुलमा पनि शिक्षकलाई नयाँनयाँ प्रश्न गरेर चकित बनाउँछे । यही जिज्ञासु बानीले कक्षामा अब्बल छे ऊ । नाच्न, गाउनमा पनि उस्तै सिपालु ।
यसपालिको दसैं भने निकै खल्लो भयो उसको । न निधारमा रातो टीका, न कानमा जमरा । न त घरमा खसी नै मार हाने । शुद्ध शाकाहारी दसैं थियो जमिलाको घरमा ।
जमिलाले बालाई प्रश्न गरेर उल्लीबिल्ली पारी, ‘बा हामीले टीका किन नलगाएको ।’
जुठो परेको थियो नि त ।
अनि हाम्रो घरमा खसी किन न काटेको ?
होइन, केमा जुठो पर्‍यो ? त्यो जुठो त फाल्दिए हुन्थ्यो नि ।
यो पछिल्लो प्रश्नले जमिलाका बाबालाई तनाव भयो । उनले छोरीलाई काखमा बसाले । भित्तामा माला लगाइएको तस्बिर देखाउँदै छोरीलाई सोधे, ‘त्यो कसको तस्बिर हो ? ’
जमिलाले भनी, ‘हजुरआमाको हो ।’
बाले भने, ‘हो, त्यही हजुरआमा बितेर यसपालि हाम्रो दसैं जुठो भयो । त्यसैले टीका पनि लगाएनौं । खसी मार पनि हानेनौं । बुझ्यौ तिमीले ? ’ जमिलाले बुझेझैं गरी टाउको हल्लाई ।
बा भन्दै गए, ‘तर क्यै छैन, मैले छोरीलाई त नयाँ लुगा ल्याइदिएकै छु नि । अनि नयाँनयाँ खेलौना पनि ल्याइदिएको छुँ । जाउ एकछिन बाहिर गएर खेल त ।’
तर जमिला बाहिर गइन । बरु उसको मनमा हजुरआमासँग बसेको, खेलेको, खाएको, गीत सुनाएको, कथा भनेको झल्झल्ती याद आयो ।
ऊ टोलाएर बसिरही ।
बाले सोधे, ‘के भो हाम्री गुडियालाई ? ’
जमिलाले तस्बिरको हजुरआमालाई हेर्दै सोधी, ‘अनि, हजुरआमालाई नयाँ फूलमाला लगाइदिन मिल्छ त ? ’
बाले भने, ‘मिल्छ नि ।’
त्यसो भए त म फूल टिप्छु । गाँस्छु । अनि, हजुरआमालाई लगाइदिन्छु नि है ?
उसले बाबाको प्रत्युत्तर पनि सुन्ने वास्ता गरिन । खुर्रर फूलबारीतिर दौडिई ।
जमिला टिप्दै गरेका फूलहरूसँग कुराकानी गर्न थाली ।
बुझ्यौ फूलहरू । हाम्री हजुरआमा बितेर हाम्रो यसपालिको दसैं मनाउन जुठो परेको रे नि त । मैले हजुरआमाको तस्बिरमा माला लगाइदिन तिमी फूलहरूलाई टिप्न आएको । दुःख नमान ल ।
जमिलाले फूल टिपेर ल्याई । र, हजुरआमाको तस्बिरमा लगाइदिई । अनि, बल्ल बाहिर खेल्न गई।
छिमेकी काकीले जमिलालाई डाक्नु भयो । र, कचौराभरि मासु दिँदै भन्नुभयो, ‘ल नानी खाऊ । तिम्रो घरमा मासु पाकेको छैन क्यारे ।’
जमिलाले भनी, ‘आन्टी, म मासु खान्न है । हाम्रो घरमा त जुठो परेको छ रे नि त । त्यसैले माछा, मासु खान्न हुन्न रे नि त ।’
जमिलाका कुराले छिमेकी काकीले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘केटाकेटीले खाए क्यै हुन्न, नानी ।’
जमिलले ठूला मान्छेले झैं भनी, ‘नाइँ म त खान्न । म पनि बुझ्ने भइसके नि आन्टी ।’
काकीले कचौराको मासुभित्र लग्दै भन्नु भयो, ‘अचेलका केटाकेटीसँग तर्क गर्न के सकिएला र ।’
केही दिनपछि जमिलाको हजुरआमाको बरखी पनि सकियो । उसले आफ्नो जन्म दिन पनि मनाई । तिहारको छेको पारेर उसका मामा केही दिन बस्ने गरी विदेशबाट आए । मामाले ल्याएका अनेक खेलौना, उपहार पाएर ऊ दंग परी । मामाको स्वागतका लागि भान्सामा दिनहुँ माछा, मासु पाक्न थाल्यो । तिहार मामासँगै मनाउन पाइने भो भनेर ऊ निकै दंग थिई ।
जमिलाको घरमा खरायो पनि पालिएको थियो । ऊ स्कुल जानुअघि र आएपछि खरायोसँग भलाकुसारी गर्थी । मन मिल्ने साथीजस्तै थियो खरायो, जमिलाको लागि । ‘ल पुन्टु म स्कुल गएँ । बाइबाइ’ भनेर हात हल्लाउँदै स्कुल जान्थी ऊ ।
एकदिन उसका मामाले ठट्टा पनि गरे, ‘दिदी भिनाजु अब अर्को तयारी गर्नु पर्‍यो । ह्याँ, जमिला भान्जीले खरायोलाई भाइ मानेर खेल्छिन् ।’
यसरी मामाले ठट्टा गरेकै साँझ त हो नि । जमिला स्कुलबाट आएर लुगा फुकाली, हात मुख धोइ । खोरमा हेर्न जाँदा त उसको प्यारो पुन्टु खरायो मरेको पो रहेछ । ऊ निकै बेरसम्म रोइ । मामाले यताउती डुलाए पनि उसको हिक्का रोकिएन । रुँदारुँदै निदाइछे ।
साँझको खाना खाने बेलामात्रै ब्युँझिइ ऊ ।
भान्सामा मासु पाकेको थियो । खाना पस्किँदै गरेको आमालाई जमिलाले घुरेर हेरी । आमाले सोध्नुभयो, ‘नानुलाई आज सन्चो भएन कि क्या हो ? ’
जमिलाले आमालाई हकारी, ‘आज मासु किन पकाएको ? ’
आमाले भनिन्, ‘मामा आउनुभएको छ नि त ।’
जमिलाले रुँदै भनी, ‘तपाईंहरूलाई थाहा छैन । आज मेरो खरायो मरेर जुठो परेको । म मासु भात खान्न । तपार्इंहरूले पनि नखानू ।’
परिवारका सबै एकपल्ट गललल्ल हाँसे । जमिलाको मन राखी दिन त्यो दिन कसैले मासु खाएनन्।
मामाले भाञ्जीको गालामा चुप्प म्वाइँ खाँदै भने, ‘मेरी जमिला भाञ्जी कति ज्ञानी, अब हामी तिहार रमाइलोसँग मनाउँला है ।’
आइतवार, कात्तिक १२, २०७४ संसार हल्लाएको आइन्सटाइनको यो सुत्र
मतदातालाई ओलीको पत्र : ‘अबको ५ वर्ष वामपन्थीलाई परीक्षण गर्नुहोस्' 4897
गृहमन्त्री खोइ ? 3200
अनेक प्रश्नमा कांग्रेस 139
गफले होइन, कामले समृद्धि ! 87
कथित कम्युनिस्ट अधिनायकवाद 213
इटहरी उपमहानगरका फाइल अख्तियारको कब्जामा 1296
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8839
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14497